फागुन पहिलो साताबाट संयुक्त आन्दोलन सुरु हुन्छ : लक्ष्मणलाल कर्ण « News24 : Premium News Channel
फागुन पहिलो साताबाट संयुक्त आन्दोलन सुरु हुन्छ : लक्ष्मणलाल कर्ण
काठमाडौं, २५ माघ । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका शीर्ष नेता तथा संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको असंवैधानिक संसद विघटनविरुद्ध आगामी फागुन पहिलो सातादेखि संयुक्त आन्दोलन गरिने स्पष्ट पारेका छन् । त्यसको लागि दलहरु आन्तरिक छलफलकै क्रममा रहेको उनको भनाइ छ ।
आइतबार (आज) काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कारमा नेता कर्णले जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत गरेको सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘यो हाम्रो लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको समाप्ति एक जना व्यक्ति, प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो । एक जना व्यक्ति, प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटन गरिदिएर जनताको अधिकार खोसिदिए ।’
उनले अहिलेको अवस्थामा संविधान रहने हो कि होइन ? गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता रहने हो कि होइन भन्ने विषयमा ठूलो चूनौती आएको पनि सुनाए । उनले भने, ‘यो चूनौतीको सामना गर्नको लागि नेकपा दुई समूह विभाजित छ । एक समूह सडकमा छ । कांग्रेसपनि सडकमा छ ।
जसपा पनि सडकमा छ । हाम्रो पार्टीको त चौथो चरणको आन्दोलन अस्ति माघ २३ गते समाप्त भएको छ। आज सम्पूर्ण जिल्लाको सदरमुकाममा प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहनको कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ । नेपालमा पटक पटक प्रतिगमन भयो । यसपालि पनि प्रतिगमन भयो ।’
नेता कर्णले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगमनको आफूहरुले सख्त विरोध गरेको सुनाए । उनले थपे, ‘हामीले विरोध गरेका छौं । हुँदाहुँदै गैरसंवैधानिक तवरले संवैधानिक आयोगका नियुक्तहरु भए, र सपथग्रहण भए ।
कुनै संवैधानिक निकायमा कसैको नियुक्ती हुन्छ भने सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यहरु, राजदूतहरुको नियुक्ती भयो संविधानको धारा २९२ मा सुनुवाई पछि मात्रै नियुक्ती हुन्छ । अहिले ३८ जनाको नियुक्ती भएको छ । यो गैरसंवैधानिक छ ।’
उनले विगतमा सरकारहरुको स्थायित्वमा प्रश्न उठेकोले त्यस्तो घट्ना नहोस भनेर नै ५ वर्ष सरकार चलोस भनेर संविधानमा व्यवस्था गरिएको उनले सुनाए । उनले भने, ‘संविधानमा नै यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम भयो, यो कानूनविपरित । संविधानविपरित छ ।
लिगबाट हिँडको गाडी अब दुर्घटना हुने खतरा छ । अब यो दुर्घटना जोगाउन सर्वोच्च अदालतको क्रेन मात्रै बाँकी छ । अदालतको क्रेनले त्यो गाडीलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ । लिग छोडेर हिँड्यो भने त्यो गाडी दुर्घटना हुन्छ ।
पार्टी, नागरिक समाज, मिडिया यसको विरोधमा लागेका छौं । संविधान जोगाउने काममा छौं । अधिकार कुण्ठित भएको छ । गाडीलाई ठीकमा ल्याएर चलाउने हामी सबैको दायित्व हो । जनताको अधिकार सुनिश्चित गराउनुपर्छ ।’
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त अब फागुनको पहिलो हप्ताबाट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन हुन्छ भनेर घोषणा गर्नुभएको छ, तपाईहरुको के छ भनाई ? भनेर सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीले संयुक्त आन्दोलन गरौं भनेर यसअघि नै भनेको थियो ।
अहिले संविधानविपरित काम भएको छ । यसको विरोधमा आन्दोलनमा जानुपर्छ भनेर हामीले भनेका हौं । संसद पूनःस्थापनको लागि सभामुखलाई आग्रह गरौं भन्नेपनि हाम्रो निर्णय थियो । सबै पार्टी मिलेर, एकसाथ आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेका थियौं । त्यसो गरियो भने जनआन्दोलनमा परिणत हुन्छ ।’
संयुक्त आन्दोलन गर्नेबारे अहिले नेताहरु लागिराखेको सुनाए । तर, यसबारेमा अहिले कुनै निर्णय नभएको कर्णको भनाई छ । उनले भने, ‘कुराकानी भैरहेको छ । तर, यो मितिदेखि, यो गतेदेखि आन्दोलन गर्ने भनेर भनेको छैन् । तर, फागुन पहिलो हप्तामा हुने कुरा प्रचण्डले भनेको कुरा छ । सबैसँग कुरा गर्नुभएको होला । म अन्दाज गर्छु ।’